BROWSEC MAKA YANDEX NCHỌGHARỊ - YANDEX - 2019
Anonymizer na encryptor n'ime otu onye: Browsec nchọgharị extension
Ihe ndi mmadu nwere ike ime ka ha ghara iga ebe ndi mmadu kwadoro ka ha jiri aka ha megharia. Otú ọ dị, ọbụna n'ihu ya, nsogbu nke saịtị a gbochibidoro dị mkpa, dịka ndị ọrụ na-ezute ụdị mgbochi dị iche iche na saịtị nleta. Nke a na-agụnye saịtị nkwụchido site n'aka ndị nchịkwa usoro, na mmachibido iwu site n'aka ndị na-emepụta saịtị (dịka ọmụmaatụ, mba ụfọdụ).
Mgbakwunye Nchọgharị Browsec bụ ụzọ dị mfe iji zere mkpọchi ahụ. Na ntinye di na ya, onye ozo na-enweta ohere iji gbanwee ezigbo adreesị IP ya na onye ugha, ma bia leta ebe a choro. Ma, n'adịghị ka ọtụtụ ndị na-ede aha onye nchọgharị na-eme nchọgharị, Browsec nwere uru ọzọ, nke na-eme ka ndọtị na-ewu ewu ma na-achọ.
Brief banyere Browsec nkwalite
Ugbu a, ị nwere ike ịhụ ọnụ ọgụgụ buru ibu nke nkwụnye ihe nchọgharị aha njirimara. Usoro a dị mfe karịa iji saịtị ma ọ bụ mmemme na VPN maka na ọ ga-ekwe omume iji kwụsị ma ọ bụ gbanyụọ nsị n'ụdị clicks.
Browsec bụ otu n'ime ndị na-ewu ewu gbakwunyere, n'ihi na, na mgbakwunye na ọrụ ya bụ isi, ọ nwekwara ike zoo okporo ụzọ. Nke a bụ ihe bara uru nye ndị na-eji saịtị nkwụsị uzo n'ebe ọrụ. Mgbatị dị otú ahụ na-enye abamuru abụọ: onye nchịkwa usoro enweghị ike ịgbaso saịtị ndị gara, na iji mgbati ịkwesighi ikike nchịkwa na Windows.
The ngwa mgbakwunye na-arụ ọrụ nke ọma na ihe niile na-ewu ewu nchọgharị, n'ihi ya, ọ nwere ike arụnyere na ihe ọ bụla nchọgharị na Chromium engine na Mozilla Firefox. Anyị ga-elele usoro ịwụnye ma jiri Browsec eji ihe atụ nke Yandex Browser.
Mbụ, wụnye ndọtị na ihe nchọgharị gị. I nwere ike ibudata ya na weebụsaịtị Browsec, ma ọ bụ site na ebe nrụọrụ weebụ nke nwere ntanye ihe nchọgharị:
Addons maka Opera (dakọtara na Yandex.Browser)
Ngalaba maka Google Chrome (dakọtara na Yandex.Browser)
Tinye-ons maka Mozilla Firefox
Ntinye na Yandex Nchọgharị
Soro njikọ "Addons maka Opera" wee pịa "Tinye na Yandex Browser"
Na windo ahụpụta, pịa "Tinye ndọtị"
Mgbe echichi nke ọma, ọkwa ga-apụta na ogwe ihe ndozi ahụ, a ga-egosipụtakwa taabụ ọhụrụ na ozi banyere ndọtị.
Biko mara na ozugbo echisịrị, Browsec ka arụ ọrụ! Ọ bụrụ na ịnweghị ndọtị ahụ, echefula iji gbanyụọ ya ka ị ghara ibudata ibe niile site na nnọchiteanya. Nke a ga - eme ka ọ ghara ibelata ọsọ nke ịdebe ibe weebụ, kamakwa ọ ga - achọ ka ị banyeghachi data ndebanye na saịtị dị iche iche.
Mgbe echichi, ị nwere ike ịmalite iji ndọtị. Ihe ngosi ya na Yandex Browser ga-adị ebe a:
Ka anyị gbalịa ịbanye na saịtị ọ bụla egbochiri. Dị ka e kwuru na mbụ, ozugbo echichichara, mgbatị ahụ na-agba ọsọ. Nke a nwere ike ịmata site na akara ngosi na n'elu panel na nchọgharị: ọ bụrụ na ọ bụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ndọtị na-arụ ọrụ, ọ bụrụ na ọ bụ isi awọ, agbatị ahụ agbanyụ.
Iji mee / gbanyụọ ihe ntinye ahụ dị mfe: pịa akara ngosi ahụ ma họrọ ON iji mee ka ọ bụrụ Gbanyụọ iji gbanyụọ.
Ka anyị gbalịa ịga na saịtị kachasị ama - RuTracker. Anyị na-ahụkarị ihe dịka nke a site na ISP gị:
Tụgharịa Browsec wee gaa na saịtị ọzọ:
Echefula ịkwụsị ndọtị mgbe ị gara na saịtị a gbochie.
Ị nwekwara ike ịhọrọ IP nke mba dị iche iche iji gaa na saịtị. Ndabere bụ Netherlands, ma ọ bụrụ na ị pịa "Gbanwee"mgbe ahụ ị nwere ike ịhọrọ mba ịchọrọ:
O di nwute, na ntanye n'efu ka 4 sava di, mana otutu ndi oru nke a, dika ha si kwuo, ezu maka anya. Ọzọkwa, ndị ọrụ abụọ kachasị ama (USA na UK) dị, nke na-abụkarị ihe zuru ezu.
Browsec bụ ndọtị magburu onwe ya maka ọtụtụ ihe nchọgharị ndị na-ewu ewu nke ga-enyere gị aka ịchọta ihe ndekọ weebụ jisiri maka ọtụtụ ihe. Ntinye mgbakwunye a adịghị mkpa ka a hazie ya n'ụzọ zuru ezu ma gbanye / gbanyụọ na 2 clicks. Nhọrọ dị mfe nke sava na free mode anaghị ekpuchi foto ahụ, n'ihi na ọ dịghị mkpa ka ọ gbanwee ihe nkesa ahụ. Na iziputa oku na-apụ apụ ma na-abata na-eme ka Browsec mara amara n'etiti ọtụtụ mmadụ.